Dil ka dhacay Baydhabo | KEYDMEDIA ONLINE
Dil ka dhacay Baydhabo
Mas'uuliyiinta laamaha amniga ayaa sheegay inay baarayaan dhacda, isamarkaana calaadda la horkeeni doono kuwii ka dambeeyay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wararka laga helayo magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah ee maamulka Koonfur Galbeed, ayaa sheegaya in xalay fiidkii halkaas lagu dilay Shariif Mukhtaar Jiis oo ahaa guddoomiyihii Ururka naafada gobolka Baay.
Koox hubeysan ayaa lagu soo waramayaa in ay guddoomiyaha ugu tageen hoygiisa oo ku yaallo Kaam ay degan yihiin dad barakacayaal ah, kadibna ay toogteen.
Marxuumka ayaa ku naafoobay rasaas ku dhacday 2018, taasoo ahayd mid isku day dil uu ka badbaaday, balse uu ka bogsaday, sida uu sheegay Wasiirka Warfaafinta Koonfur Galbeed Cabdi Maxamed. Goobjooge ayaa sheegay in kooxdii ka dambeysay dilka Mukhtaar Shariif Jiis ay goobta isaga baxsadeen.
Ilaa iyo had majirto cid sheegatay Mas'uuliyadda dilka, hase yeeshee waxaa xusid mudan in dilalka noocaan ah ay fuliso Kooxda Alshabaab.